Young | Dr. Parinya (Myanmar) Slim & Beauty Clinic
Facial Design (လှပသောမျက်နှာပိုင်ရှင်)
သင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်လိုသူများထဲမှတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါက Facial Design Programကိုသတိရလိုက်ပါ။အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ မိမိတို့ရဲ့လှပမှုကိုဘယ်တော့မှရပ်တန့်သွားစေလို ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ်များဖြင့်ခွဲစိပ်စရာမလို၊ရက်ရှည်အနားယူစရာမလိုပဲ မိမိတို့အလိုရှိတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းမျက်နှာပြင်ကိုပြုပြင်ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒေါက်တာပရင်းယား၏ Facial Designကုသမှုကြောင့်မှသင့်ကိုထာဝရလှပအောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Botulinum Toxin ကြောင့်မျက်နှာပြင်သည် V-Shape(ဗီပုံသဏ္ဍာန်)အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်စေခြင်း
အသားအရေကိုပင့်တင်ပေးပြီးတင်းရင်းစေခြင်းအပြင်အသားအရေအတွင်းရှိ Collagenဖြစ်ထွန်းမှုကိုအားဖြည့်ပေးသည့် 4D ပိုးချည်မျှင်ထည့်သွင်းကုသမှုဖြစ်သည်။
နှာတံကိုဖြောင့်စင်းလှပအောင်ပုံသွင်းပေးခြင်း၊မေးစိချွန်စေရန်ပုံသွင်းပေးခြင်းဖြင့်မျက်နှာပြင်ကိုပြည့်ဖြိုးလှပပြီး နုပျိုအရွယ်တင်စေကာHyaluron ကြောင့်မျက်နှာပြင်အား Heart Shape(အသည်းပုံ) ရရှိနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုသမှုကြာချိန် - မိနစ်(၉၀)ထက်မပိုပါ
သတိပြုရန် - မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပြသနာများပေါ်မူတည်ပြီးကုသနိုင်သည်။
နှိပ်နယ်ခြင်းမပြုရ၊YAG နှင့် IPL ကဲ့သို့သောကုသမှုမျိုးကိုမပြုလုပ်ရ၊သို့သော်ပိုးကြိုးမျှင်ထည့်သွင်းပြီး နောက်တဆက်ထဲ Botox နှင့် Filler ကိုပါတွဲဖက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Stem Cell Swiss (စိတ်ပျို ကိုယ်နုခြင်းကိုတဖန်ပြည်လည်ဖြစ်ထွန်းစေခြင်း)
ဆေးထိုးကုသမှုဟာခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိအလုပ်လုပ်ပုံမမှန်သောဆဲလ်များနှင့်ဆဲလ်အသေများနေရာတွင်အစားထိုးပေးပြီးဆဲလ်များပြန်လည်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာစေကာဆဲလ်များအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းပုံမှန်ဖြစ်လာစေသည်။ Stem Cell ဆေးကို ခန္ဓာကိုယ်၏လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအထိရောက်ရှိစေနိုင်သောကြာင့် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာ ရွှင်လန်းပေါ့ပါးစေပြီးအစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ လည်ပတ်မှုစနစ်အားကောင်းစေပါသည်။
ကြာချိန် - မိနစ်(၃၀)ထက်မပိုပါ
သတ်မှတ်ချက် - တပတ်လျှင်တကြိမ်
Under Forever Young
Ultherapy HIFU ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း?
အင်အားပြည့်အသံလှိုင်း(Ultrasound)ကြောင့်အသားအရေကိုတင်းရင်းချပ်ယပ်စေခြင်း၊အသားအရေအတွင်း Collagen ဖြစ်ထွန်းမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်း၊ဝမ်းဗိုက်ရှိလျော့တွဲနေသည့်အသားအရေကိုတင်းရင်းချပ်ယပ်စေခြင်း၊လည်ပင်းနှင့်ရင်ဘတ်ရှိအရေးအကြောင်းများကိုလျှော့နည်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကိုခွဲစိတ်စရာမလို၊ရက်ရှည်အနားယူစရာမလိုပဲပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်ရှိလျှော့တွဲနေသည့်အသားအရေကိုပင့်တင်ပြီးတင်းရင်းစေကာ V-Shape ဖြစ်စေခြင်း
- ကုသမှုခံယူပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းသိသာပါတယ်၊ Collagen ဖြစ်ထွန်းမှုကိုအဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်ပေးပြီး၊အချိန်တစ်လ မှ နှစ်လအတွင်း အကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုရရှိစေပါတယ်။
- ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဘာရှိပါသလဲ?
- ပြုလုပ်တဲ့နေရာအနီးတဝိုက်မှာအနည်းငယ်အနီရောင်သမ်းပြီးယောင်ယမ်းမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့၊ တခဏအတွင်းမှာပဲသက်သာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
- Ultherapy HIFU ကဘယ်လိုလူတွေအတွက်သင့်တော်ပါသလဲ?